Huawei CEO ga-enwe ekele maka oku sitere n'aka Joe Biden | Gam akporosis
Onye isi ụlọ ọrụ Huawei ga-enwe ekele maka oku sitere n'aka Joe Biden
Ụlọ Ignatius | | Huawei, Noticias
N'oge usoro ntuli aka nke mere ka Joe Biden bụrụ onye isi ala nke United States, ọtụtụ bụ ndị mgbasa ozi na-egosi na amụma Donald Trump gbara na ụlọ ọrụ ndị China ọ nwere ike ịgbanwe. Agbanyeghị, dịka anyị gwara gị ụbọchị ole na ole gara aga, amụma a ga-aga n'ihu otu a, ma ọ dịkarịa ala n'ihe metụtara Huawei.
Mụ na Huawei kemgbe nso nso a Xiaomi esonyela, ọ bụ ezie na enweghị otu mmachi ahụ dị ka Huawei, mana ọ bụ nzọụkwụ mbụ. Naanị otu afọ na n'ihi mmachi nke ụlọ ọrụ America ịre ahịa na Huawei, ụlọ ọrụ Asia aburula onye na emeputa ihe nke isii nke rere otutu smartphones na 2020.
Na 2020, Ewepụrụ nsọpụrụ, Huawei sub-brand nke mere na o nwere ike ọzọ na-enwe ihu ọma ọha, na-enweta ọrụ Google ọzọ, na eleghị anya ka mee ego megide ọghọm akụ na ụba na Huawei ga-eche ihu n'oge ahụ n'ihi veto nke gọọmentị United States.
Ha na-eche oku
Onye isi ulo oru na onye guzobere Huawei, Ren Zhengfei, ekwuola na N'ajụjụ ọnụ South China Morning Post, na ọ ga-achọ ka anyị United States ga-agbanwe ụzọ ya wee nwee amụma mmeghe karịa gaa na ụlọ ọrụ ndị China:
Companylọ ọrụ anyị enweghị ume itinye aka na oke ikuku a. Anyị na-agbasi mbọ ike imepụta ngwaahịa dị mma. Anyị nwere olile anya na gọọmentị US nwere ike ịmepe emepe emepe maka abamuru nke azụmaahịa US yana mmepe nke akụ na ụba US.
O kwukwara na ọ ga-amasị m ịkpọ oku site n'aka Joe Biden iji kpaa maka mmachibido iwu nke Huawei na United States yana ịkọwa na ụlọ ọrụ ahụ agaghị ere nkewa ekwentị ya.
Banyere teknụzụ 5G nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara, ọ na-ekwu na ọ dị njikere kekọrịta ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ US nke mere na ha nwere ikike zuru oke na njikwa ha, arụmọrụ, njikwa ...
Anyị ekwuola na mbụ na anyị nwere ike ịfefe teknụzụ 5G anyị niile. Nke ahụ gụnyere ọ bụghị naanị ikike mmepe, kamakwa mmemme isi mmalite na koodu isi. Ọ bụrụ na America chọrọ teknụzụ mgbawa anyị, anyị nwere ike ịnyefe ya. Okwu anyi ji ezi obi (mana) o nweghi ulo oru biara igwa anyi okwu rue ugbua.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Onye isi ụlọ ọrụ Huawei ga-enwe ekele maka oku sitere n'aka Joe Biden
Biden na-etinye aka na TikTok ọrịre na ụlọ ahịa Oracle